चीनसँग विवाद बढिरहेकै बेला भारतले यो के गर्यो ? विश्वभर मच्चियो हलचल ! | Public 24Khabar
Home International चीनसँग विवाद बढिरहेकै बेला भारतले यो के गर्यो ? विश्वभर मच्चियो हलचल...
चीनसँग सीमा विवाद जारी रहँदा भारतले शनिबार ब्यालेस्टिक मिसाइल ुसौर्युको नयाँ संस्करण सफल परीक्षण गरेको छ ।
भारतीय रक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो नयाँ मिसाइल करिब एक हजार किलोमीटर टाढासम्म निशाना लगाउन सक्छ । बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित समाचार अनुसार सौर्य जमिनदेखि जमिनसम्म हमला गर्न सकिने मिसाइल हो
भारतले यो मिसाइल चीनसँग लद्दाखमा सीमा विवाद भइरहेका बेला परीक्षण गरेको हो । यसर्थ पनि भारतको यस्तो कदमलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । जब कि चीनसँग सीमा विवाद समाधानका लागि पटक पटक वार्ता प्रयास भए पनि सफल हुन सकिरहेको छैन ।
यस्तै अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक तर्फका उम्मेदवार जो बाइडेनको कोरोना भााइरस जाँचको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताइएको छ । उनका चिकित्सक डा।केभिन कोनरले सो कुराको जानकारी दिएका छन्। उनले शुक्रबार जो बाइडेन र उनकी श्रीमतीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी गराएका छन् ।
Previous articleथापाथली अस्पतालमा २८ वर्षकी युवतीले जन्माइन् एकैपटक ५ शिशु
Next articleसडकमा बसेर अम्बा बेच्ने बैनीहरु, भन्छन्– दुःख गरेर खानुपर्छ ( भिडियो हेर्नुहोस)